Umhla My Pet » 5 Iindlela Yokufumana Uthando Ubomi Bakho!
Sonke rhoqo, nokuba zinganegalelo okanye ngabom, ndikhangele lowo. Loo mntu esinokwabelana ubomi bethu kwaye ngubani oya siyeke enyamezela bayahlelwa wokuphila eflethini kunye Fluffy ikati. Nazi ezintlanu iindlela ukuphepha loo ntlekele nokuba izixa ezininzi yokutya cat ukuhlawulela!
Yenza A Night Class
umdla Common ngundoqo apha. Nokuba ukufota okanye sokubhala, kusoloko khetha udidi ebusuku edibanisa umdla yakho. Ukuqonda yinto enkulu xa kuziwa ekufumaneni soulmate. Kufuneka sifumane omnye leyo nto iintlobo ezininzi kangaka kuhle eziphumela ukuya komnye yaye abaninzi kangaka eccentrics cwaka eziphumela ukuya kwenye. Ngoko ke, ukuba ukhetha iklasi ubusuku apho wena unomdla kuwo kwenyusa amathuba okuba ukuba uya kudibana nabantu nje wena.
Nemivalo / Clubs
Xa abantu ngokubanzi musa ukuya kwenye imivalo neentonga nje ngoku kuba boyika abantu bacinge ukuba ithubeleza okanye into. Kodwa kusekho iindawo apho uthando kutyatyamba. Njengoko isiselo aqukuqela abantu badla moss isiqingatha kangako into abantu bacinge okanye ukhathazeke kangangoko ngento zokutsho ngaloo ngqiqo iindawo nangoku kakhulu ukuhlangabezana abantu. Ngokucacileyo Bendingayi ukucebisa ukuya ekhaya kunye nawo ngobo busuku, kodwa uthabathe inani lazo. Isenokuba isiqalo sento.
Umsebenzi apho uninzi abantu bakufumanisa uthando ubomi babo njengendinisa njengoko izandi. Ngoko zama ukuba umsebenzi uyamthanda ukuba unako kwaye kukho ithuba omkhulu uya unqakraza umntu omthandayo. Kwaye ukuba uneentloni macala kubo, ungaxhalabi. Ukuba nto ithetha ukuba kwenzeka, iyakuba kwenzeka. Kwaye ukuba akuyi, kukho ukutya intlanzi elwandle njengoko bathi.
Umphathi wesekethe gigging Intle dibana nabantu. Loo nto ifana kwisekethe bar kuphela ukuba nithe nawaphula akhululeke ngokuthi into efana, “Ndandikuthanda ukuba riff wadlala ngayo.” Le yindlela elula kakhulu kumkhawulela enye amaqashiso abahlobo endleleni kakhulu ukuze bafunde isixhobo somculo, ukuba ngaba sele banisa, uze uphume khona kwaye abanye eyahlukeneyo kulo.
Musa Imbonakalo yokufuna
Mna zidweliswe iindlela ezine apho ukuhlangabezana omnye kodwa lokugqibela mhlawumbi yeyona ibalulekileyo. Kufuneka ukuba uqiniseke ukuba musa ukuza apha nje ukuba ubomi bakho bexakeke ukufumana umntu wowufeza. Qinisekisa ukuba indyebo kwenzeka ebomini bakho kuloo ntlanganiso umntu yinxenye enye kuphela yemishini yakho, hayi lonke mission. Ngamanye amazwi kufuneka ubonise ukuba yomelele ngokwaneleyo ukuhlala uFluffy limcaba nokuba akukho ngendlela ingakumbi wanomfanekiso ikamva lakho. Imbonakalo bekholose ulusu lwakho. Akukho nto nomtsalane.